Labsiin yeroo ariifachiisaa sochiilee hawaasaa ugguraman fooyyessuusaa himame
Labsiin yeroo ariifachiisaa sochiilee hawaasaa ugguraman fooyyessuusaa himame Featured
Siraaji Fageessaa wayita ibsa kennanitti
Finfinnee: Labsiin Yeroo Ariifachiisaa hojiirra oolfamuunsaa sosochii hawaasaa lagannaa gabaafi tajaajiloota geejibaa ugguramanii turan fooyyeesuusaa Ministeerri Ittisaafi Sekirataraatiin Koomaandi Poostii ibse.
Ministirri ministeerichaa Obbo Siraaj Fageessaa jijjiiramoota labsichaan dhufanirratti Roobii darbe gaazexeessitootaaf ibsa kennaniin akka jedhanitti, hojiirra oolmaa labsichaan booda sosochiin hawaasaa guutummaatti ta’uu baateyyuu fooyya’uu danda’eera.
Nageenya amansiisaa biyyattii qabatamaan mirkaneessuu keessatti labsiin hatattamaa qofti furmaata hinfidu kan jedhan ministirichi, hawaasnis ta’e mootummaan gaaffilee jiran adda baasuun furmaata laachuuf of kennuu akka qaban hubachiisaniiru. Keessumattu hawaasni bal’aa gaaffiisaa adda baafachuu akka qabu kan himani Obbo Siraaj, mootummaanis gaaffilee uummataa ka’aa jiraniif xiyyeeffannoo laachuun furuu qabaa jedhaniiru.
Gaaffilee siyaasaa biyyattii keessatti ka’aa turan tasgabbeessuuf hidhamtoota hiikuun furmaata ta’ee waan argameef mootummaan kutannoon hojjechaa jiraachuu himanii, qaamoleen karaa qaxxaamuraan aangoo qabachuuf yaalan nageenya hawaasaa booressaa turuusaanii dubbataniiru.
Kanarraa kan ka’es iddoowwan garagaraatti gaaga’amni lubbuu lammiileefi qabeenyarra gahuu dubbatanii, maqsuuf qaamoleen nageenyaa qindoominaan hojjechaa kan jiran ta’uu himaniiru.
Akka ibsasaaniitti, jeequmsa mudachaa jiru kanaan hawaasni jireenya harkaa gara afaanii jiraachaa jiran hubamaa jiraachuusaanii ibsanii, wayita ammaa garuu fooyyee argisiiseeraa jedhaniiru. Ta’us, guutmmaa guutuutti rakkoon nageenyaa furameera jechuu akka hintaane himanii, daandiiwwan gurguddoo Amboo gara Lixaa geessaniifi Finfinnee gara Jimmaa geessan ammallee jijjiiramni kan hinargamne ta’uu addeessaniiru.
Yeroo ammaattis kutannoo qaamota nageenyaafi hawaasaan sararri daandiilee biyyattii dhibbeentaa 80-90 hojii idileetti deebi’uu danda’uusaa himaniiru.
Hojiirra oolmaa labsii kanaarratti komiin hawaasaa akka hinuumamneef hordoffiifi deggarsi barbaachisaa taasifamaa kan jiru ta’uus himanii, raawwiirratti rakkooleen yoo jiraatan garuu toora bilbilaa 011-5527003/012-5511429/012-5505523 irratti bilbiluun eeruu kennuun kan danda’amu ta’uusaa dubbataniiru.
Nageenya amansiisaa bakka turetti deebisuufis hawaasni marti Koomaandi poostii sadarkaa sadarkaan ijaaraman waliin qindoominaan hojjechuu akka qabu hubachiisaniiru.
Torban kana/This_Week 10595
Torban darbe/This_Month 96952
Guyyaa mara/All_Days 1435375